Author: Sasar Fenris
Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha; d. Ma bannaana in muwaadinka Somaliland loo dhiibo dawlad shisheeye. Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka uu Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Ma bannaana in laga qaado xubinta Golaha Wakiilada tallaabo baadhitaan ama waraysi ama qabasho ama xidhitaan ama tallaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo oggolaansho looga helo Golaha Wakiilada mooyaane.
Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn.
Ma bannaana in loo magacaabo xilka Guddoomiyaha Maxamadda Sare qof aan buuxin shuruudaha hoos ku sheegan: Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada xilkeeda; 2.
Wajigii labadna waxa no hirgalay 9xabo Wajigii saddexadna waxa hirgaly 15 xabo Waxa nogu so dhamaty si guulaya Sidoo kale ururku wuxuu usoo kuur galay xaaladaha guud ee deegaankawaxaa sidoo kale farxad u ah ururka in ay bulshada deegaankau riyaaqeen hawshaa baaxadda leh ee uu ururku wado iyagoo uga mahadceliyay hawshooda iyo dhabar- adaygoodaqaybo badan oo bulshada ka mid ah ayuu ururka kala kulmay casuumado halkaas oo si fiican laisugu waraystay.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub. Inuu ka garsooro khilaafka ka dhex abuurma laamaha Dawladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdooda. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Waxa malinti arbacad safarka ubaxay xubno katirsan ururka uu hogaminayo gudomiyaha ururka MOHA abdi- khaliq waxayna kaqabten hawlo badan mudadi 3bari ay kusugnayen deganka waxana ka xusi dastukrka ; 1.
Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko.
Tagida barnamujki solarka wajikisii labad tiradisu tahay 9 xabo waxayna katagen sharacyada magaaladda xidda 2. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya. dastuurak
Reer Muqdisho waxa ay u baahanyihiin cid amnigooda sugta sida aad adiguba amnigaaga u sugtay. Musharax said dani oo hadda ah Musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland wuxuu shaaciyey oo buugiisa tirakoobka ku sheegay inay Puntland yihiin gobolada Bari iyo Nugaal oo kaliya.
Saraakiisha sare ee kale oo xeer ka soo baxay Golayaasha Xeer-dejintu awood u siinayo magacaabistooda iyo xil-ka-wareejintooda. Waxay ku dadaalaysaa in colaaddii raagtay oo dhex ooli jirtay dalalka Geeska Afrika lagu beddelo is af-garad iyo isku soo dhawaansho.
Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid tahay ta Golaha Wakiilada. Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal AC ama telka Daryeelka ku habboon garsoorayaasha xeer baa nidaaminaya.
Xarunta Golaha Wakiiladu waa Magaalo-madaxda. Kani waa Gabay la magacbaxay Ninka fusub duubka u xiroo asad inoo doorra Waxaan kula hadlayaa Baarlamaanka Cusub ee Puntland Dulaal iyo malaal baa ku badan dagalladeeniiye Codkoo loo dareerriyo haddaan qofiba dookhiisa Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada. Haddii uu istiqaalad dhiibo ama uu geeriyoodo.
Xarunta Golaha Guurtidu waa Magaalo-madaxda. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Dabeecada khalqigu kama sinmaan kalana door roone Daganaanta iyo fiiradiyo dabacsanaantiisa Qaarbaa darooriya warkoon dulucda beegayne Hadal aan dhaguhu diidinnoo beena laga dayray Aflagaado diidkiisa iyo sharaf u duubnaanta Doorkiyo abwaannada siduu diiradda u saaray Dumarkiyo caruurraha siduu ugu dadaalaayo Duqowdiyo siduu uga warqabo duubabkii dhaqanka Ilaaheey ha daayee walee waan ku diirsadaye Ninka doorran duubka u xidhoo Asad inoo doorra.
Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d.
Ciidanka Booliisku waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada iyo dhaqan-gelinta xeerarka; qaab-dhismeedkoooda iyo waajibaadkoodana xeer ayaa qeexaya. Sidoo kale xaruntu waxay mahadcelinaysaa Dowladda Puntland iyo Shakhsiyaadkii ka geystey gacanta farsamo, maaliyadeed ambabixinta cuub iyo wax-garadka aaday deegaanka si loo xakameeyo colaadda.
Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan ay badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah. Waxaa maanta la soo gabagabeeyay shirkii Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah uga socday magaalada Muqdisho. Kala xadaynta awoodaha saddexda waaxood waxay noqon doonaan sida uu Dastuurku dhigayo.
Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u Ieeyahay in la doorto, waxna uu doorto. Reer Muqdisho uma baahna duco afka ah oo aan waxba la socon ee waxa ay u baahanyihiin ficil dhab ah oo dadka inta hadhay lagu badbaadiyo.
Xubinta Golaha Guuridu waxa ay waayi kartaa xubinnimadeeda haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii Iagu soo xushay, ama ay gudan waydo xilka sida uu u caddaynayo xeer -hoosaadka Golaha Guurtidu. Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland.
Mashruuc-sharci kasta uu Golaha Guurtidu aqlabiyad ku ogolaaday waa in loo gudbiyo Golaha Wakiilada, kaas oo markaa: